ဧည့်သည်စီမံကိန်းများ | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
ဒါဟာသင်ဓါတ်ပုံတွေကို upload တင်နှင့်သင့်စီမံကိန်းများအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြမှတ်ချက်များထွက်ခွာနိုင်ရာအရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အဟောင်းကို site မှအဟောင်းတွေစီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည် ဒီမှာ.
ကတင်ပြ Andypontinen 09: 06 - Wed, 2017 / 04 / 56 အပေါ်
Evinrude 3hp 3303S longshaft ပြဿနာ
ငါ '' 63 Evinrude 3hp, longshaft ဗားရှင်းရှိသည်။ တစ်ခုခုရုတ်တရက်မော်တော်ကားရှတ်နှင့်လက်ကိုင်အကြားကျိုးပဲ့ သွား. , ငါနှစ်နှစ်အကြာကတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံညှိ-Up လုပ်, ဒါပေမယ့်ငါ boating သောအခါငါဒီနွေရာသီ powerhead (လက်ကိုင်ခြမ်း) မဖွင့်ခဲ့ပါဘူး။ လက်ကိုင်တော့ဘူးမော်တော်ကားရှတ် (နှင့်ပန်ကာ) ကွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ယင်းမော်တာ၏အနိမ့်စိတျအပိုငျး ok ဖြစ်ပါတယ်။ ငါလွှတ်စက်နှိုးပလပ် ယူ. flywheel လှည့်သည့်အခါ, ငါကသင့်ကြောင့်ဆလင်ဒါအတွက်နှစ်ဦးစလုံး piston ပြောင်းရွှေ့သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့လည်းကျိုးသွားပြီမော်တော်ကားရှတ်ဖို့လက်ကိုင်ကွန်နက်ရှင်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း (powerhead မှ) မော်တော်ကားရှတ်ထိပ်တန်းဦးခေါင်းရဲ့မော်တော်ကားရှတ်အပေါ်သာမန် Boron (ကြယ်ပွင့်ကဲ့သို့) ဦးခေါင်းရှိပြီးသောငါ၏ '' 65 ဂျွန်ဆင်3မြင်းကောင်ရေအတွက်ထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော, ထူးဆန်းတဲ့ -foursquare ဖြစ်ပါတယ်။
ကတင်ပြ ttravis 09: 14 - Thu, 2017 / 11 / 49 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ Evinrude 3hp 3303S longshaft ပြဿနာ by Andypontinen
ငါကပြေးပါလိမ့်မယ်လျှင်ကြည့်ရှုရန်မော်တာအောက်ပိုင်းယူနစ်ကိုချွတ် ယူ. start ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ powerhead နှင့်အတူပြဿနာမရှိပါဘူးဆိုရင် gearcase မှတဆင့်သွားကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ တူသောအောက်ပိုင်းယူနစ်ဂီယာရေနံကြည့်ဘယ်အရာကိုသနည်း ဒါဟာဖျံမကောင်းတဲ့ သွား. သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်ထိုင်လျက်ပြီးနောက်သူတို့ကိုထသော့ခတ်စေခြင်းငှါ, မူသောသင်တို့ဂီယာ၌ရေရတယ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ကောင်းတစ်ဦးအစိတ်အပိုင်းများမော်တာသို့မဟုတ်သင်ထွက်စျေးဝယ်နိုင်ကောင်းတစ်ဦးအနိမ့်ယူနစ်နှင့်အတူအနည်းဆုံးရနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ကို eBay စျေးဝယ်ချင်ပေလိမ့်မည်။ အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများကိုမရရှိနိုင်ပါသော်လည်း, သငျသညျလျင်မြန်စွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသငျသညျသငျ့သထက်လမ်းကပိုဖြုန်းကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအလုံးကိုဆိတ်ကွယ်ရာကယူပြီးနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုတက်သန့်ရှင်းရေးကွိုးစားပါနှင့်အသစ်ဖျံနှင့်အတူပြန်ထားတော်မူ၏။
ကတင်ပြ ricklummer 04: 24 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 09 / 07 အပေါ်
ကတင်ပြ gameroomfan 09: 10 - Sun က, 2017 / 13 / 31 အပေါ်
Evinrude 25 မြင်းကောင်ရေနဲ့ Big အမွှာ (မော်ဒယ် 25018) အဘယ်သူမျှမ Start ကို / ပေါက်ကြား Carb
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးအပင်, ငါ့ကိုဤကွီးစှာသော web site ကိုစတင်များနှင့်ထိန်းသိမ်းဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်နေဖြင့်စတင်ပါပါစေ!
သို့သော်မအောင်မြင်ပါက start ဖို့ကြိုးစားနေ, အချို့စစ်ဆေးခံရလုပ်နေတာပြီးနောက်, ငါသည်ငါ့သံသယရှိသည်။ သူကပြောပါတယ်ခံရ, ငါသည်မီးပွားဘို့ check လုပ်ထားကြောင်းကိုစစ်ဆေးအတည်ပြု။ သို့သျောလညျး, ငါခွံမာသီး connection ကိုထုပ်ပိုးမြင့်မြန်နှုန်းအပ်ထံမှ carb dribbling လောင်စာသတိပြုမိသည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ carb လည်ချောင်းဧရိယာ၌လောင်စာဆီအများကြီး။
ငါ carb disassembled နှင့်, float setting များကိုပိတ်ထားခဲ့ကြသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ float အဟောင်းစတိုင်ဖော့ဆို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ၏အဘယ်သူမျှမက start ပြဿနာအနည်းဆုံးအချို့မကောင်းတဲ့ / ညစ်ပတ်ထိုင်ခုံကြောင့်ဖြစ်စေ, ကြောင့်စနစ်တကျပိတ်ပြီးမဟုတ်အဓိကကတော့ float အဆို့ရှင်ဖို့ရေကြီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နှင့် / သို့မဟုတ်မလျော်ကန်သော float setting များကိုလျက်ရှိသည်ယူဆနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်မ carb ကိရိယာအစုံနှင့်အသစ်ကတော့ float အမိန့်ရှိသည်။ ဤတွင်အကြှနျုပျ၏မေးခွန်းများကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
1) ငါ float ဆက်တင်ပေါ်တွင်ရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းအကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်ခဲ့: 1 / 32 ထက်မပို "။ carb ကိုယ်ခန္ဓာ၏ထိပ်တန်းအစွန်းနှင့်အတူအဆင့်ကနေပြီးတော့ 1 1 / 4" float တစ်စက်။ ဒီမှန်ကန်သောလား?
2) ငါ havent အပ်ထုပ်ပိုးအပေါ်အများကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါထုပ်ပိုးသည့် leaky carb အထောက်အကူပြုအရှင်, မကောင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း အသစ်သို့မဟုတ် replcement ထုပ်ပိုးများအတွက်ပြင်ဆင်ချက်ကဘာလဲ?
ကတင်ပြ ttravis 09: 14 - Thu, 2017 / 11 / 55 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ Evinrude 25 မြင်းကောင်ရေနဲ့ Big အမွှာ (မော်ဒယ် 25018) အဘယ်သူမျှမ Start ကို / ပေါက်ကြား Carb by gameroomfan
အစဉ်မပြတ်ငါရုံကတော့ float ...
ဒါကြောင့်အဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစဉ်မပြတ်ငါရုံကတော့ float ။ အဆငျ့မှာအပ်ပန်းကန်လုံးထဲသို့လောင်စာဆီစီးဆင်းမှုကိုပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ငါဘာမှမတိုင်းတာပါဘူး။
အသစ် carb ကိရိယာအစုံ installed ရပါမည်သည့်ဆေးထိုးအပ်ထုပ်ပိုးများပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ finsihed အခါသင်၏ carb လုံခြုံရေးအန္တရာယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအရာ leek သင့်ပါဘူး။
ကတင်ပြ gameroomfan 09: 15 - Fri, 2017 / 16 / 03 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အစဉ်မပြတ်ငါရုံကတော့ float ... by ttravis
ok, တုံ့ပြန်မှုအတှကျကြေးဇူးတငျ ...
ok, ထိုတုံ့ပြန်မှုကိုကျေးဇူးတင်စကား။ ငါမှာရှာဖွေနေခဲ့ကြအဆိုပါ carb ပစ္စည်းများအစားထိုးထုပ်ပိုးမပါဝင်ခဲ့ချေ။
ကျွန်မအဖြစ်ဝေး '' အဘယ်သူမျှမက start '' ပြဿနာကိုစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်သကဲ့သို့လက်ျာဘက်လမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုယူဆနေပါတယ်။
ကတင်ပြ ttravis 09: 15 - Fri, 2017 / 23 / 57 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ok, တုံ့ပြန်မှုအတှကျကြေးဇူးတငျ ... by gameroomfan
ကတင်ပြ သူ Mike L ကို 04: 21 - Sat, 2018 / 19 / 56 အပေါ်
ငါ၏အအဘိုးရဲ့ lightwin restore ပြန်မှာငါ့လက်ကိုကြိုးစားရန် Going, အရောင်ကနေ 54 ဖြစ်လှပါတယ်။ ဒီမှာပထမဦးစွာ timer နေရာမှာ။ လူအပေါင်းတို့သည်သင်တစ်ဦးညှိတက်ဘို့အကြံပြုအစိတ်အပိုင်းများ (carb ပြန်ဆောက်, ပလပ်, မှတ်, condenser, ကွိုင်, လှုံ့ဆျော။ ငါအင်ဂျင် 25 နှစ်သို့မဟုတ်ဒါအတွက်ကို run မထားပါဘူးအဖြစ်လွန်းအောက်ပိုင်းယူနစ်ဖျံကိုအစားထိုးဖို့လိုအပ်အတွေးအခေါ်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ တစ်ဦးကိုမြင်လျှင်မ ငါလိုဖျံပါဝင်သောကိရိယာအစုံ။ တစ်ဦးကိရိယာအစုံသို့မဟုတ်ဘယ်မှာမှအဖြစ်မဆိုအကြံပြုချက်များကိုလည်း starter ကြိုးများနှင့်နွေဦးအပေါ်စီစဉ်သူတို့ကိုရဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပါသလဲ။
ကတင်ပြ Starfish229 08: 27 - မွန်, 2018 / 12 / 57 အပေါ်
အားကစားဖြစ်သူ Scott 1962 start မည်မဟုတ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကတခါအခုကျော်ဖွင့်မရပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးစီးနင်းယူစတင်ခဲ့တယ် 25 နှစ်ပေါင်းဘို့ရေကိုမရှာဘူးသောမိသားစုလှေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအပြေးကိုစောင့်ရှောက်မည်မဟုတ်စတင်အရည်ပေမယ့်မော်တာကိုသုံးခြင်းဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့် 1962 ဖြစ်သူ Scott ရဲ့မော်တာများအတွက်လက်စွဲစာအုပ်ဝယ်ယူရန်နဲ့ကျွန်မလာမယ့်ဘာလုပ်သင့်သောအရာကိုအချို့အကြံဥာဏ်လိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါမြစ်နဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါ TLC လိုအပ်ပါတယ်
ကတင်ပြ ttravis 10: 28 - Sun က, 2018 / 22 / 48 အပေါ်
Boss အားဖြင့် 5.5 HP ကဂျွန်ဆင် 1960 မော်ဒယ်, CD-17 စီမံကိန်း "ဟုဦးဘို" Petersson
ရုံကဆက်ပြောသည် / စီမံကိန်းများ Menu ကိုမှ facebook ကို site မှတင်သွင်းခဲ့သည်။
Boss အားဖြင့် 5.5 HP ကဂျွန်ဆင် 1960 မော်ဒယ်, CD-17 စီမံကိန်း "ဟုဦးဘို" Petersson - စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်
ကတင်ပြ boatman350 01: 23 - Wed, 2019 / 10 / 36 အပေါ်
ဟေးလူတိုင်း 2019 ၌သင်တို့၏စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. လူတိုင်းကိုမေးချင်ခဲ့တယ်နှင့်မည်သို့သူတို့ပျော်ရွှင်နှစ်သစ်ကျေးဇူးတင်စကားလူတိုင်းသွားကြသည်
ကတင်ပြ Lewis က Wall 03: 14 - Thu, 2019 / 18 / 03 အပေါ်
ငါနှစ်ဆလိုင်းလောင်စာဆီစနစ်ဖြင့်တစ်ဦး 10 မြင်းကောင်ရေ 1957 ဂျွန်ဆင် Seahorse ရှိသည်။ ငါတစ်ခုတည်းလိုင်းစနစ်ကပြောင်းချင်တယ်။ ငါလောင်စာစုပ်စက်ထက်တခြားဘာအစိတ်အပိုင်းများကိုလိုအပ်သလဲ? ငါ carburetor လိုအပ်တယ်ဆိုရင်, ဒီစိတျအပိုငျးအတှကျ nomenclature ကဘာလဲ?
ကတင်ပြ ဟုတ်ပါတယ် 03: 22 - Sun က, 2020 / 18 / 42 အပေါ်
ပထမ ဦး စွာဤဖိုရမ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဒါကအပြင်ပန်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပြီးဒီစာမျက်နှာဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုပါ။ ဒါကမင်းရဲ့ပရောဂျက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းငါ Johnson CD-14 ပါ၊ ငါတင်လိုက်တဲ့ပုံနဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းကိုငါသုံးခဲ့တယ်။ ရိုးရှင်းစွာမရှိမဖြစ်။
ငါယိုစိမ့်နေသောဖိအားပေးသည့်တိုင်မှခေတ်မီတစ်ခုတည်းရေတိုင်ကီသို့ပြောင်းလဲကာကာဗွန်အထက်လောင်စာဆီအတွက်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် mounting bracket ကိုလုပ်ပြီးလောင်စာဆီအားလုံးကိုဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့သည်။ သို့မှသာအရာရာတိုင်းသည်ရှင်းလင်းမှုနှင့်ကိုက်ညီပြီး cowling ကိုပြန်ပြောင်းနိုင်သည်။
ငါပထမ ဦး ဆုံးစတင်တာနဲ့လုပ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လောင်စာဆီနဲ့လောင်စာဆီအကြားလောင်စာဆီလိုင်းထဲကိုငါထည့်လိုက်တဲ့လောင်စာစစ်ထုတ်စက်ကယိုစီးနေပြီးမော်တာလည်ပတ်နေစဉ်စုပ်စက်ကမဖြည့်ဘူး။ ငါအကြံပေးအဖွဲ့အပေါ်မီးသီးနှင့်အတူလိုင်းများ pump နှင့် filter ကိုဖြည့်သကဲ့သို့, carb အပေါ်ဖန်ခွက် filter ကိုကြည့်ပါ။ motor လည်ပတ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်လိုင်းလိုင်းရှိ filter သည်အပြည့်မှသည်လွတ်သွားသည်။ လောင်စာဆီစုပ်စက်ကလောင်စာဆီတစ်မျိုးပေးနေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ်ထည်ထည်လားလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအလုပ်မလုပ်ပုံရတယ်။
ငါစဉ်းစားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ဤစမ်းသပ်မှုအတွက် ၃ ဂါလံလောင်စာဆီတိုင်ကီတစ်လုံးသာလောင်စာဖြည့်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ ကန်ထဲရှိပစ်ကပ်“ ကောက်ရိုး” သည်အလုံအလောက်နစ်မြုပ်ခြင်းမရှိသော်လည်းမည်သူမဆိုအကြံအစည်ရှိသလားဟုကျွန်ုပ်သိချင်ခဲ့သည်။ ။ ငါလာမယ့်ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အတွက်လောင်စာဆီဂါလံအပြည့်အဝရောထွေးခြင်းနှင့်နောက်တဖန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
Jake B, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်
ကတင်ပြ ဟုတ်ပါတယ် 03: 22 - Sun က, 2020 / 18 / 56 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ လောင်စာဆီပြောင်းလဲခြင်း - စုပ်စက်အလုပ်မဖြစ်ဘူးလား by ဟုတ်ပါတယ်
ဒါကငါလောင်စာစုပ်စက်များအတွက်သွေးခုန်နှုန်းဖန်တီးရန်စားသုံးမှုထူးထူးအပြားပြားပြုပြင်မွမ်းမံပုံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာငါ hack ကလွှနှင့်အတူငါဖြတ်လူမီနီယံအပိုင်းအစနှင့်ဖိုင်တစ်ဖိုင်နှင့်အတူပုံသဏ္apesာန်သည်။ ၎င်းတွင်တံဆိပျကိုဖနျတီးရနျ၎င်းငျး၏နောကျစာကောငျးအဟောင်းအစု၏သေးငယ်သည့်အပိုင်းအစတစ်ခုရှိသည်။
ကတင်ပြ ttravis 03: 23 - မွန်, 2020 / 19 / 11 အပေါ်
ပထမ ဦး စွာသင်၏စုပ်စက်သို့သွားသောလိုင်းပေါ်တွင်သင်သည်ကောင်းမွန်သောဖိအားသွေးခုန်နှုန်းကိုခံစားရနိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
ဒုတိယအနေနဲ့၊ မင်းဆီကိုအမှုန်တွေ ၀ င်လာတဲ့အထိညီမျှခြင်းကနေလောင်စာဆီစစ်ထုတ်မှုကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပြန်ထည့်လိုက်တယ်။
သူများသည်ပုံကောင်းများဖြစ်ပြီးအရာအားလုံးမှန်ကန်သည်။ သင်အလုပ်များပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့မှတ်ချက်များကိုအမှန်တကယ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုတင်ထားပါ။
ကတင်ပြ ဟုတ်ပါတယ် 03: 22 - Sun က, 2020 / 19 / 02 အပေါ်
ဒါကငါသုံးနေတဲ့လောင်စာဆီစုပ်စက်အပြင်လူမီနီယမ်စတော့အိတ်တစ်လုံးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကွင်းခတ်ပုံပါ။ ၎င်းသည် starter recoil assembly ကိုကိုင်ထားသော screw နှစ်ခုကို အသုံးပြု၍ motor သို့ mount လုပ်သည်။ ငါလောင်စာလိုင်းများနှင့် pump ကိုအားလုံး cowling အောက်မှာ fit ခွင့်ပြုမယ့်ပုံသဏ္andာန်နှင့်အနေအထားကိုရှာဖွေမတိုင်မီအနည်းငယ်ကွင်းခတ်ခဲ့ရတယ်, ဒါပေမယ့်သူကအားလုံးကိုက်ညီခြင်းနှင့်အဖုံးဆက်လက်ပေါ်နှင့်သွားသင့်ကြောင်းကြည့်ရှုသည်။
ကတင်ပြ ttravis 03: 23 - မွန်, 2020 / 19 / 03 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ လောင်စာဆီ Mounting bracket က by ဟုတ်ပါတယ်
ကတင်ပြ က Nicholas parham 03: 30 - မွန်, 2020 / 14 / 25 အပေါ်
ငါ jw-11 3hp ဂျွန်ဆင်တွင်အလုပ်လုပ်နေသည်မှာမည်သူမဆိုဆွဲရန်စတင်ရန်အစိတ်အပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါသလား။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ!
ကတင်ပြ ttravis 03: 31 - အင်္ဂါနေ့, 2020 / 11 / 45 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ငါ jw-11 3hp ကိုလုပ်နေတယ်။ by က Nicholas parham
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အစိတ်အပိုင်းများကို manual။ ဤတွင်သင်၏အတွက်ရရှိနိုင်အစိတ်အပိုင်းများစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Jw-11.
ငါ့ရဲ့ HP3ကိုကြည့်ချင်တယ် ညှိ - စီမံကိန်း.
3 နာရီ 58 မိနစ်အကြာက
16 နာရီ 35 မိနစ်အကြာက
17 နာရီ 8 မိနစ်အကြာက
17 နာရီ 11 မိနစ်အကြာက
17 နာရီ 12 မိနစ်အကြာက
17 နာရီ 13 မိနစ်အကြာက
17 နာရီ 14 မိနစ်အကြာက
17 နာရီ 16 မိနစ်အကြာက
17 နာရီ 17 မိနစ်အကြာက
17 နာရီ 20 မိနစ်အကြာက
17 နာရီ 22 မိနစ်အကြာက